Home Wararka Dhalinyaro lagu soo eedeeyay Burcad-badeednimo oo la sii daayay
Maxkamada sare ee dalka Seychelles ayaa shaaciay in la sii daysay dhalinyaro Soomali ah oo lagu waayay wax danbi ah. Maxkamada ayaa sheegtay in raggan aan lagu heyn wax cadeymo ah sidaa darteedna ay yihiin xor.Shan ruux oo ah dhalinyaro Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay ahaayeen burcad badeed ayaa laga sii daayay xabis ku yaal dalk Seychelles kadib markii lagu waayay dambigii lagu soo oogay.
Maxkamadeynta shanta qof ayaa waxa ay bilaabatay Sebtember sanadkii 2020, ka dib markii ay qabteen markabkii ciidamada badda ee Yurub ah. Howlgalka Atalanta ee EU NAVFOR Somalia ayaa shanta tuhmane ku wareejiyay maamulka Seychellois sanadkii 2019 iyadoo la tixraacayo heshiis wareejin ah oo u dhexeeya jasiiradda ku taal galbeedka Badweynta Hindiya iyo Midowga Yurub oo taageero ka helaya Xafiiska Qaramada Midoobay ee Mukhaadaraadka iyo Dambiyada ee magaciisa loo soo gaabiyo (UNODC).
Raggaas la siidaayay, iyadoona UNDOC ay wado qabanqaabada ah in la masaafuriyo islamarkaana lagu soo celiyo Soomaaliya. Soomaali kale ayaa weli ku jira xabsiyada jasiirada Seychelles iyadoo dadkaasi loo haysto dambi ah inay ahaayeen burcad badeed.